Maxaa looga hadlay shirweynihii Dalka Macedonia ay ku yeesheen Jaaliyadaha Galmudug ee Yurub.? [SAWIRRO] | Dayniile.com
Home Warkii Maxaa looga hadlay shirweynihii Dalka Macedonia ay ku yeesheen Jaaliyadaha Galmudug ee...
Maxaa looga hadlay shirweynihii Dalka Macedonia ay ku yeesheen Jaaliyadaha Galmudug ee Yurub.? [SAWIRRO]
Magaalada Struga, ee ku taal Waqooyiga Macedonia, waxaa lagu qabtay Shirwaynihii sanadlaha ahaa oo ay ka qaybgaleen ururada ku bahoobay dalladda Galmudug European Diaspora Association Network (GEDAN).
Waxaa sidoo kale kulanka lagu casuumay, goob joogna ka ahaa marti sharaf ka socotay hay’ado & ururo caalami ah oo Soomaali & ajnabi isugu jirta.
Kulankan, oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay, waxaa lagu soo bandhigay waxqabadka dalladda GEDAN ee muddadii sannadka ahayd ee ay jirtay iyo waxqabadka mustaqbalka dhow ay tiigsaneyso, waxaanna ugu horreeyn ka hadlay Guddoomiyaha Dalladda Faarax Aadan Yuusuf oo shirka furay, kuna soo dhoweeyey marti sharafta.
Maxamed C/llaahi, Maxamuud Saciid [Ruush] & Xassan Liisho oo ka mid ah mas’uuliyiinta Dalladda ayaa soo bandhigay macluumaad ku saabsan shaqooyinkii u qabsoomay & jihada loo socda; Waxaanna sidoo kale la soo bandhigay macluumaad la xiriira dhaqaalihii soo galay dallada & sidii loo maareeyay.
Wasiirka Haweenka & Horumarinta Xuquuqul Insaanka Galmudug Ubax Dhiblaawe ayaa kulankaasi kaga qeybgashay Aalada Fogaan-Arag waxayna bogaadisay hormuudka GEDAN.
“Galmudug waxay maanta u baahan tahay in maskax, xoog & aqoon ba la isugu geeyo sidii lagaga qaybqaadan lahaa dhismaha kaabayaasha muhiimka u ah adeegyada bulshada” Ayeey tiri Ubax Dhiblaawe.
Guddoomiyaha jaaliyada Galmudug Finland Cabdullaahi Cadceed, oo ka mid ahaa mas’uuliyiintii kulankaasi ka qeybgashay wuxuu dhinaciisa ka warbixiyay marxaladihii laga soo maray in la helo Galmudug ay ku middeysan yihiin reer Finland.
“Galmudug Finland waxay u tahay sharaf in ay xubin firfircoon ka noqoto dallada GEDAN, iyada oo meteleysa, wakiil na ka ah mushtamaca reer Galmudug ee ku dhaqan Finland” Ayuu yiri Cadceed, wuxuuna si koobban u sharaxay safar uu dhowaan ku tegay deegaano ka tirsan Galmudug, isaga oo qalab isboorti gaarsiiyay kooxo ka dhisan Galmudug.
C/casiis Cali Ibraahim [C/casiis Xildhibaan] oo ka mid ahaa aqoonyahanadii ka soo qeybgalay ayaa kulanka shir guddoominayay, waxaanna gabagabadii kulankii maanta shahaado sharaf lagu guddoonsiiyay Guddoomiyaha dalladda qurba-joogta Puntlande e PEDAN C/fitaax Jaamac [Janna-Gale].
“C/fitaax abaal aan duugoobin ayuu ku leeyahay GEDAN, wuxuu na la wadaagay wax kasta oo suurtagalin karay in dalladdu ay kheyrkeeda wax la qeybsato, waana dhici kartaa in garab istaaga uu na garab istaagay ay dad kale u fasirtaan siyaabo aan loo baahneyn, annagu waxaan leenahay cid kasta ee ama nagu soo biirta ama kaalin ka qaadata dedaalada dalladdu ay hormuud u tahay waa soo dhoweynayaa” Ayuu yiri Guddoomiyaha GEDAN Faarax.
Guddiga fulinta dalladda ayaa cod u qaaday 2 urur oo ka kala dhisan dalalka Finland & Netherland in ay ku soo biiraan dalladda GEDAN, iyada oo cod wadar oggol ah lagu ansixiyay ku soo biiritaanka ururadaasi ee dalladda.
Abdishakuur Jarmal oo ah isku xiraha GEDAN & Galmudug & xiriiriyaha Jarmalka & Dowladda Jarmalka, oo kulanka ka hadlay wuxuu dhinaciisa sheegay isaga oo ku hadlaya magaca guud ahaan dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Jarmalka, gaar ahaan reer Galmudug in ay diyaar u yihiin in ay kala shaqeeyaan GEDAN sidii qof kasta uu qeyb uga qaadan lahaa tayeynta kaabayaasha adeega bulshada deegaanada Galmudug. Shirkan ayaa socod doona 7 cisho waxaanna la filayaa in la soo gabagabeeyo maalinta Khamiista ee taariikhdu ku beegan tahay 2 December.
Previous articleBahrain outlook improves on fiscal reforms, S&P says
Next articleKursigii loo diiday Jawaari ee Sumadiisu aheyd HOP103 goordhow la doortay
Doorashada boobka ee Farmaajo ku adkeysanayo Inuu Xoog kusoo baxo asagoo si sharaf loogu wareejiyay loogana hiiliyay ajaanibtii xooga dalka uga bixiyay waxaan is...
SAWIRO:- Maamulka Somaliland oo burburisay Guryo ay deganaayeen dad rayid ah
Dabley hubeysan oo caawa ku dilay magaalada Cape-town Wiil Soomaalida ah
Barcelona Oo Gashay Tartanka Mbappe & Qoddobka Suurogalin Kara Inay Real...
Tartanka kubbadda Cagta Degmooyinka oo meel fiican maraya